Nahoana Aho no Tokony Hanampy Olona? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kachin Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Mooré Myama Norvezianina Nzema Ossète Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tiorka Tseky Tsonga Twi Télougou Umbundu Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Zavatra roa tsy hain’ny olona
Tanora tia manome
Ahoana no azoko anampiana olona?
#1: Matetika no misy manampy ny olona tia manampy.
Ho voamariky ny olona ianao hoe tia manome sy tia manampy. Halala-tanana aminao sy hanampy anao koa izy ireo. Hoy ny Baiboly:
“Aoka ianareo ho zatra manome dia mba homena koa ianareo. ... Araka izay famarana ampiasainareo no hamarana ho anareo.”—Lioka 6:38.
“Izay ataonao amin’ny olona ihany no hataon’ny olona aminao.”—Lioka 6:38, Dikan-teny Anglisy Maoderina.
#2: Manao soa ho an’ny tenanao ihany ianao rehefa manampy olona.
Lasa afa-po sy mahatsapa hoe manana ny hajanao ianao rehefa manao zavatra tsara ho an’ny olona. Hoy ny Baiboly:
‘Ny mahantra sy ny kilemaina sy ny malemy tongotra ary ny jamba no asao, rehefa manasa olona hisakafo ianao. Amin’izay dia ho sambatra ianao, satria tsy manan-kavaly anao ireo.’—Lioka 14:13, 14.
Betsaka ny tanora tia manome sy tia manampy olona. Diniho, ohatra, ireto:
“Te hipetrapetraka hijery tele eo ambony sezalava aho indraindray, nefa mieritreritra hoe reraka be izao ry dada sy neny rehefa mody avy any am-piasana. Lasa àry aho mitsangana manasa vilia sy manadio trano. Anaovako kafe mafana koa ry zareo satria tena tia kafe. Hozy i Neny avy eo rehefa tonga: ‘Madio kosa izany trano izany an! Sady misy fofona manitra be. Misaotra akia a!’ Faly be foana aho rehefa manao zavatra hoatr’izany ho an’i Dada sy Neny.”—Casey.
“Manampy ahy foana ry Dada sy Neny ka manome an’izay rehetra ilaiko. Mba nanampy an-dry zareo koa àry aho tamin’ny herintaona rehefa nanana olana ry zareo. Simba be ny aotomobilin-dry zareo tamin’izay ka izaho no niantoka ny nanamboarana azy, na dia lafo be sy tsy maintsy nihena be aza ny tahiriko. Tsy nanaiky ry zareo tamin’ny voalohany, nefa nisisika ihany aho. Mbola betsaka noho izany aza no tokony hataoko amin-dry zareo. Sady tiako erỳ ilay manome zavatra ho an-dry zareo.”​—Holly.
Fantatrao ve? Maro amin’ny tanora Vavolombelon’i Jehovah no faly satria manampy olona hianatra Baiboly. Misy aza mifindra any amin’ny tany ilana mpampianatra Baiboly mihitsy.
“Avy any Etazonia aho no nifindra tany Meksika mba hampianatra Baiboly. Tsy manam-bola firy aho ka tsy dia afaka manome vola na zavatra ho an’olona. Fantatro anefa hoe rehefa manome ny fotoanako sy ny heriko hampianarana olona aho, dia izany no tena ilaina noho ny hoe manome vola na zavatra.”​—Evan.
Mba te hahatsapa an’izany hoe faly manampy olona izany koa ve ianao? Misy zavatra sasany azonao atao ireto:
Ho an’ny olona ao an-tranonareo:
Aza miandry irahina fa tonga dia sasao ny vilia na diovy ny trano sy ny tokotany
Andrahoy ny sakafo
Manorata karta kely ho fisaorana ny ray aman-dreninao
Ampio ny iray tam-po aminao rehefa manao ny devoarany
Ho an’ny olon-kafa:
Andefaso karta kely ny olona tsy salama
Manaova zavatra hanampiana ny olona be taona eny akaikinareo
Tsidiho ny olona marary tsy afaka mivoaka ny trano
Mividiana zavatra hatao fanomezana ho an’olona hitanao hoe kivikivy
Soso-kevitra: Mitadiava hevitra hanampiana olona, ary ataovy izay anampiana olona iray amin’ity herinandro ity. Tena ho faly ianao raha manao an’izany.
“Faly ianao rehefa avy manampy olona. Tsapanao hoe nanao zavatra be ianao, ary ny olona koa mankasitraka an’ilay izy. Mety ho nahafinaritra ny nanao an’ilay izy na dia tsy nieritreritra an’izany aza ianao tamin’ny voalohany. Mety tsy ho tsapanao akory hoe nisy zavatra nafoinao, satria afa-po be ianao avy eo.”—Alana.
Zavatra Azo Atao Hanampiana Olona
Hizara Hizara Nahoana Aho no Tokony Hanampy Olona?
ijwyp no. 25